BlueConic: Unganidza, Batanidza, uye Gonesa Rwendo rweVatengi | Martech Zone
BlueConic: Unganidza, Batanidza, uye Gonesa Rwendo rweVatengi
Chipiri, Kurume 3, 2015 Chipiri, Kurume 3, 2015 Douglas Karr
Nerubatsiro rweakakura data uye ekushambadzira matekinoroji, kune chitsva chizvarwa chemashambadziro ezvekushambadzira mapuratifomu ayo ari kupa yepakati imba yekuchengetera, mune chaiyo-nguva, uko kushamwaridzana kwevashandisi kunotorwa pane uye nekunze uyezve kushambadzira mameseji uye zviito zvinoiswa kwavari. BlueConic ndeimwe yemapuratifomu akadaro. Yakarongedzwa pamapuratifomu ako aripo, inounganidza uye kubatanidza kusangana kwevatengi vako uye nekukubatsira iwe nekugadzira zvine mutsigo kushambadzira mameseji
Iko kugona kwekuita chaiyo-nguva uye kutora akawanda data mapoinzi anobatsira makambani mukutungamira tarisiro yavo kana mutengi kuburikidza nerwendo rwevatengi zvakanyanya nemazvo. Nekutarisa parwendo rwevatengi kwete kukambani yako, iwe unogona zviri nani kukurudzira kutenga sarudzo uye, pakupedzisira, kuwedzera kukosha kwehupenyu hwevatengi vako.
Maviri epakati eBlueConic maitiro, Anoramba Achifambiswa uye Anoramba Achienderera, anoita kuti iwe uburitse rwizi rwekutaurirana runotora hurukuro yevatengi kubva kuchannel kuenda kuchiteshi. Iyo BlueConic chikuva chinopindirana nechero ipi yekushambadzira tekinoroji stack; inotora nzira ine simba uye inofambira mberi kune manejimendi manejimendi. uye inoshanda mune chaiyo-nguva, pachiyero.
Kubva kuBlueconic Chigadzirwa Peji
Mushandisi Dhata Yekuunganidza - Unganidza uye chengeta zvese zvakasimbiswa data, senge mazita uye avhareji odhiyo tsika, uye isingazivikanwe hunhu dhata, kunge clickstreams uye fomu mafomu. Zvese izvi zviito zvakabatanidzwa mune imwechete mushandisi chimiro uye zvinowedzeredzwa nekubatana kwega kwega.
Chitupa Chinozivikanwa - Batanidza akawanda profiles uye ubatanidze ivo kuita rimwe. Chitupa kushamwaridzana kunoenderana nehunhu hwevashandisi uye zvakasarudzika zvitupa, uye zvinogona kutomisirwa nenjodzi Yakagadzirwa nevatengesi, mitemo ipapo inobatanidza maprofiles akaparadzaniswa.
Actionable Nzwisiso - Ruzivo rwunobvumidza vashambadziri kuti vaongorore kudyidzana kwevashandisi uye nekushandura zviito zvinoitika mumikana mitsva Vatengesi ikozvino vanogona kuwana zvikamu zvitsva, vanocherekedza shanduko muhunhu hwevashandisi nekufamba kwenguva uye vanogadzira anochinja-chinja madhibhobhodhi kuti vatarise cross-chiteshi dialogues munguva chaiyo.
Chikamu chakangwara - Inotendera vashambadziri kupatsanura mapoka evashandisi vega se data inbound inotorwa. On-the-fly segmentation inoitwa inogoneka kushandisa zvirevo senge zvemukati zvekushandisa, chaiyo-nguva yekuita zvibodzwa, kutendeuka kwehuwandu, kudyidzana frequency, uye dhatabhesi demographic kana psychographic dhata.
Nguva dzose-paKugadzirisa - Enderera nekugadzirisa kusangana nevanhu pakutendeuka, kuwanikwa kwechigadzirwa, uye / kana kuita kukuru. Iyo yakazara yekudyidzana nhoroondo yemumwe mushandisi inowanikwa yekukasira optimization, ichikurudzira kurudziro yemapoka evashandisi mukati meichi chikamu chikamu.
Campaign Kubatana - Chengetedza kuenderana kwemishandirapamwe uye mameseji parwendo rwevatengi. Uku kuenderera mberi kunoda mhinduro dzemushandirapamwe mumapuratifomu ekutumira mameseji, akadai sewebhu, email, kuratidza, kutsvaga uye nemagariro.
Tags: zvinoitisa nzwisisozviitonguva dzose-pane optimizationblueconicmushandirapamwe unowiriranazvisarudzochitupa kushamwaridzanaprofilessmart chikamumushandisi dhata rekuunganidza
14 Kunetsekana Maitiro nemaAgency